Iifonti zeskripthi simahla ezili-17 | Izidalwa ezikwi-Intanethi
URicard Lazaro | | Idizayini yeMifanekiso
Kule nqaku, ndikulethele ezinye Iifonti zeskripthi simahla (linganisa ukubhala ngesandla) eya kuthi inike umntu kunye nokudlala ngokudlala kuyilo lwakho.
Apha ngezantsi ndibeke uluhlu lwakho Iifonti ezili-17 Oko kunokuba nomdla wokufaka isicelo kwiiprojekthi zakho.
1 Iskripthi seMothproof
3 Ipeyinti yesandla
4 Bhrasha Isandla Esitsha
5 ULevi brush
6 Ukujonga inkunzi
7 Ibhokhwe yesikhumba
8 Amanga Eyinyani
9 I-Ampad Brush
14 Iintliziyo zasehlotyeni
17 Ulutsha olusendle
Iskripthi seMothproof luhlobo oluchazayo nolubanzi oluchazwe kwi-calligraphy eyilwe ngu-Diego Quintana. Olu hlobo lochwethezo inobunzima obubonakalayo obufanayo kwiifom zamasiko amnyama, kodwa ngokufundeka ngcono. UQuitana uyilo lokuzifundisa elizimeleyo kunye nenkqubo yewebhu ezifundisa ngokwakho.
ICylburn luhlobo lohlobo oludityanisiweyo oluyilwe ziifayile ze Dai. ICylburn yiyo ngokwesakhiwo esisekwe kwi-Roundhand kodwa ibhaliwe ngebrashi ebonisiweyo kunye noxinzelelo oluqulathiweyo olusahlula kwiingcambu zalo zesiko. Iifayile ze-Dai zisebenzisa imvelaphi yayo kwepeyinti koonobumba.
Iphosakele kwaye ayilingani, Ipeyinti yesandla Uhlobo lochwethezo olusekwe ekubhaleni ibrashi eyilwe ngu-Ursula Hitz. Olu hlobo lochwethezo luyadlala kwaye ilungele iimveliso ezijolise kubantwana okanye umxholo.
Bhrasha Isandla Esitsha
Bhrasha Isandla Esitsha luhlobo lochwethezo, olusekwe ekubhaleni ibrashi, ephefumlelwe yiFlash Bold, uhlobo lochwethezo olwenziwe nguEdwin W Shaar ngo-1939. Inguqulelo entsha ye-K-Type yenza lula, ikhanyise kwaye ithambise imiphetho edibeneyo. Iikhontrakthi ziyaphuculwa ukuze zisuse nabuphi na ubunzima obushiyekileyo, obangela ukuba I-glyphs egudileyo egudileyo, ilungele izihloko kunye nokubonwayo.
ULevi brsuh Yayilwa ngumyili waseRomania uLevi Szekeres. Iipeyinti zokupeyinta kwaye zineempawu ezifanayo kwi-albhamu kaDavid Guetta egubungela 'Uthando Olunye' kwiColdplay's 'Viva la Vida'. Umahluko obizwa ngokuba yiLevi ReBrushed uyafumaneka simahla kwaye kubandakanya ukwahluka kweplatter splatter.
Ukujonga inkunzi luhlobo lochwethezo intle kwaye ikhululekile. Enkosi kumanqanaba ohlukeneyo okwehliswayo, i-Surfing Capital inika imvakalelo ebunjiweyo, iyenza indlela eqinisekileyo yokongeza umnxeba wobuntu kumyalezo wakho.
Imivumbo ye-inki yohlobo lohlobo olwenziwe nguMåns Grebäck, Ibhokhwe yesikhumba zilungele amagcisa ajonge ukongeza impembelelo yempembelelo yaseAsia emsebenzini wabo. Ngenyameko kulingisa uhlobo lwamanqaku alindelweyo kwi-East Asia calligraphyI-Goatskin Brush lolona hlobo lubalaseleyo lomhlaba njengoko iguqula isimbo saseAsia ukuze ilingane nonobumba besiNgesi.
Kubandakanywa oonobumba abakhulu noonobumba abancinciUkongeza ekukhetheni kweempawu zokubhala, iGoatskin Brush yinto ekufuneka uyenzile ukuze uqokelele ifonti.
Amanga Eyinyani yifonti yokukhuphela simahla eyilwe nguJonathan Harris ukuba uyisebenzise ngokwakho. Ukongeza kokugubungela oonobumba, uhlobo lochwethezo lukwabandakanya amanani, iisimboli kunye neempawu zokubhala. Ngobuchule, ukungalingani, kunye nesans-serif yokugqiba, Ubuxoki bokwenyani buya kwenza ukuba isicatshulwa sakho sibonakale sirhabaxa.
Enkosi kumanqaku ayo avela kwibrashi, I-Ampad Brush yenza ukubonakala okuxinezelekileyo, njengoko oonobumba bebonakala ngathi bacinyiwe kwiscreen. Eyilwe nguGene Gilmore, iAmpad, luhlobo lohlobo olo inika imvakalelo eyoyikisayo kwimifanekiso okanye uyilo lwakho. I-Ampad iza ngeendlela ezine ezahlukeneyo, ke unokukhetha eyona ilungileyo ukuba ihambelane neprojekthi yakho.
Ibhakoni Uhlobo lohlobo olwenziweyo olwenziwe nguCuong Truong Van. Kusimahla ukukhuphela zombini Ukusetyenziswa komntu kunye nokuthengisa. Olu hlobo lochwetheza luya kongeza ubuntu kwimisebenzi yakho.
Ukutya Yenziwe ngumyili kunye nomzobi uLeva Mezule. Iileta zazotywe ephepheni ngebrashi eshinyeneyo kusetyenziswa i-inki emnyama. Kunye Iiglyphs ezingama-80, unobumba ngamnye unesakhiwo esahlukileyo esinenkangeleko egqwethekileyo.
Eyilwe ngesandla ngebrashi, URissa nika i imvakalelo eyenziwe ngesandla. Kukulungele ngokufanelekileyo ukubhala, iilogo kunye nokunye okuninzi.
Eyilwe liqela leJroh Creative, Selima luhlobo oluhle kwaye luhle kakhulu. Ngaba simahla Ukusetyenziswa komntu kunye nokuthengisa.
Uhlobo lohlobo olwenziwe ngokubhala ngebrashi, Zonke ii-glyphs zayo ngoonobumba abakhulu kwaye yayilwa yi Hustle Supply Co. Iintliziyo zasehlotyeni es ezilungele ukuprinta kunye neeprojekthi zedijithalikubandakanya iiposta kunye noyilo lwe logo.
Yenziwe nguVlad Cristea kunye noRaul Taciu, Ibrashi sisibindi esineempapasho zesibindi esine-brush esisekwe ngoku ibandakanya iiglyphs eziyi-100 yenziwe ngemivumbo echanekileyo kunye nemigca egudileyo ukunika ukujonga "okwenziwe ngezandla".
IBanaue yinto ebhalwe ngesandla. Igama lohlobo lochwethezo ligama elithathwe kwiPhilippines. Olu hlobo lochwethezo unabalinganiswa abali-104, nazo zonke ii-glyphs ezisisiseko.
Ulutsha olusendle Uhlobo lochazo olulinganisa ukubhala ngesandla. Yenziwe ngumyili uJeremy Vessey. Ulutsha lwasendle luchazwa njenge 'a typography yanamhlanje ngalo limema i-adventure kwaye liphumele ngaphandle ». Ilungele iilogo, ukuqeshwa, iikhalenda, iimpahla kunye nokunye okuninziUlutsha lwasendle lusimahla ukuba lusebenziselwe umntu kunye nokuthengisa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » Iifonti zeskripthi sasimahla ezili-17
Kukho ezintle, enkosi kakhulu!
U-Emmanuelle Moureaux kunye 'nehlathi lakhe lamanani'
Isayikholoji yembala isetyenziswe kwiimpawu